दर्जनौं माइक्रोफाइनान्सले बढाए नाफा, कुन सबैभन्दा अब्बल ?
काठमाडौं : लघुवित्त कम्पनीहरुको तुलनात्मक रुपमा नाफा राम्रो देखिएको छ । पुँजी कम भएका लघुवित्त कम्पनीहरुले नाफा पनि विस्तार गरेपछि लगानीकर्ताको दोस्रो बजारमा आकर्षण पनि धेरै छ । यसैबीच, नेप्सेमा सूचीकृत ५० लघुवित्त कम्पनी मध्ये ४४ वटाले दोस्रो त्रैमास अर्थात् पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार सबै कम्पनीको प्रमुख वित्तीय सूचकमा सकारात्मक सुधार आएको छ ।
नाफामा आकर्षक वृद्धि भइरहेको छ भने रिजर्भ कोष पनि क्रमशः मजबुत बन्दैछ । अनि, प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । यसरी कम्पनीहरुको आकर्षक वित्तीय विवरण प्रकाशन हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा पर्नु स्वभाविक पनि हो । पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरु एकआपसमा मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाने क्रम पनि बढेको छ ।
कतिपय कम्पनीहरुले मर्जर वा एक्विजिसन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन् । यससँगै ती कम्पनीहरुको सेयर कारोबार पनि रोकिएको अवस्था छ । मर्जर वा एक्विजिसनपछि कम्पनीहरुको वित्तीय सूचकहरु थप मजबुत बन्दै विश्वास गर्न सकिन्छ । यो यो निकै सकारात्मक पाटो हो ।अब, हेरौं रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने ४४ लघुवित्त कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ?
लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने ४४ लघुवित्त कम्पनीमध्ये ४२ को चुक्ता पुँजी बढेको छ । २ लघुवित्तको चुक्ता पुँजी गत वर्षकै रहेको छ । यद्दपि, यी कम्पनी (समिट र सामुदायिक लघुवित्त) ले गत वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिए पनि उक्त बोनस सेयर वित्तीय विवरणमा पुँजीकृत नगर्दा पुँजी यथावत देखिएको हो ।
तर व्यवहारमा भने यिनीहरुको पनि पुँजी बढेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी बढाउनेमा समता लघुवित्त रहेको छ । यसको पुँजी २३५.९९% ले बढेर १९ करोड ११ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी हुनेमा भने छिमेक र निर्धन उत्थान लघुवित्त रहेका छन् । दुवै कम्पनीको पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ ।
३९ कम्पनीको जगेडा कोष बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ३९ वटा लघुवित्त कम्पनीको जगेडा कोष बढेको छ । ४ को भने जगेडा कोष घटेको छ । तर यस अवधिमा एक कम्पनीको जगेडा कोष ऋणात्मक रहेको छ । जगेडा कोष ऋणात्मक हुनेमा घोडीघोडा लघुवित्त रहेको छ ।
जगेडा कोष घट्नेमा छिमेक, किसान, आरएसडीसी र फरवार्ड लघुवित्त परेका छन । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढ्नेमा भने आरम्भ लघुवित्त रहेको छ । यसको जगेडा कोष २ लाख ६ हजार रुपैयाँबाट बढेर १ करोड ७३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
४० लघुवित्तको नाफा बढ्यो
पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा ४० लघुवित्तको खुद नाफा बढेको छ भने ४ को घटेको छ । नाफा घट्नेमा ग्रामीण विकास, कालिका, किसान र आरएमडीसी लघुवित्त रहेका छन् । यता, सबैभन्दा धेरै नाफा बढाउनेमा भने स्पर्स लघुवित्त परेको छ ।
यसको नाफा ६ लाख २१ हजार रुपैयाँबाट बढेर १ करोड ३७ लाख ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा छिमेक लघुवित्त रहेको छ । यसको नाफा २२.७५% ले बढेर ४८ करोड १६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नाफा हेर्दा चुक्ता पुँजीलाई पनि सँगै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२३ लघुवित्त कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्यो
पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा २३ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ । १२ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । ८ को गत वर्षको वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी समावेश गरेका थिएनन् । यी मध्ये अधिकांश यसै वर्ष आइपीओ जारी गरेका कम्पनीहरु रहेका छन् ।
घोडीघोडा लघुवित्तले यस वर्षको वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी राखेको छैन । यता, सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी फरवार्ड लघुवित्तको ८० रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ ।